बीर बहादुर चन्दको बाल नाटक करडो खसीको विमोचन ।।
कञ्चनपुर, १४ पुस ।
पूर्व-पश्चिम साहित्यिक तथा साङ्गीतिक अभियान अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा आज भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महाकाली गजल प्रतिष्ठानको स्थानीय आयोजनामा दीपज्योति स्मृति प्रतिष्ठानले गरिरहेको अभियानको उक्त कार्यक्रममा गितकार तथा संगितकार डा. डि आर उपाध्यायको गीति एल्बम तथा साहित्यकार बीर बहादुर चन्दको बाल नाटक करडो खसीको विमोचन भएको छ ।
डा. डि आर उपाध्याय एकै दिन ७ बटा गिति एल्बमको रचना अनि रेकर्ड गरेर नया रेकर्ड कायम गरेको भन्दै श्रष्टाहरुले दीपज्योति स्मृति प्रतिष्ठान र डा. डि आर उपाध्यायलाई बधाई दिएका थिए । सात बटै प्रदेसका संस्कृति,कला,साहित्य, समकालिन समाज,समस्या ,समाजको बर्तमान परिबेस, आम मानिसको चिन्तन, माया प्रेम लगायतका बिभिद्ध क्षेत्र समेटेर गितहरुको रचना गरीएको डा. उपाध्यायले बताएका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै गुगुल्डी वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बीर बहादुर चन्दले कला संस्कृति र साहित्यको संरक्षणका लागि सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा महाकाली गजल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कविराज भट्टले कला संस्कृति ,संगित,साहित्यको संरक्षण सम्बद्धनका लागि डा. डि आर उपाध्यायले रचना गरेका संगितहरु एक दमै फलदायक हुने बताए ।
साहित्यीक रचनाहरुको उत्थानका बिषयमा कार्यक्रममा छलफल समेत भएको छ । कार्यक्रममा कञ्चनपुरका पचास बढी स्रष्टाहरूले आफ्ना रचना सुनाउनुका साथै कञ्चनपुरको साहित्यिक तथा साङ्गीतिक अवस्थाबारे विमर्समा सरिक थिए ।